साबुनपानीले हात धुनु नै कोरोनाबाट बच्ने उत्तम उपाय’ डा. प्रियम्वदा पौड्याल | Everest Times UK
बेलायत सरकारले चरणवद्ध रुपमा नीतिहरु ल्याएको छ । शुरुमा चीनमा यो रोग देखिने बित्तिकै युकेले केही गरेन । शुरुमा युके सरकारको नीति करिब ५०/६० प्रतिशत जति मानिसलाई यो भाइरस लाग्न दियो भने प्रतिरोध क्षमता आफै बढ्छ र दीर्घकालिन समाधान हुन्छ भन्ने थियो । त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि ‘मिटिगेट’ नीति ल्याइयो । त्यो चाहिँ संकेत देखिएको मानिस एक्लो छ भने सात दिन, परिवारमा छ भने १४ दिन घरमै बस्ने नीति हो,तर स्कुलहरु खुल्ला नै राखियो । यातायातहरु सुचारु नै राखियो । यदि त्यसरी नै छोड्ने हो भने करिब साढे दुई लाख मानिसहरु मर्न सक्छन् है भनेर इम्पेरियल कलेज लण्डनका वैज्ञानिकहरुले सरकारलाई सुझाव दिए । त्यसपछि सरकारले रोगलाई दबाउने नीति ल्यायो। तर अहिले पनि युकेले पूर्णरुपमा लक डाउन गरेको छैन । रेल, बस चलेकै छन् । कतिपय कामहरु जस्तै निर्माणसम्बन्धी पनि रोकिएका छैनन् । अरु देशको स्थिति हेर्दा यो अझै पर्याप्त छैन भन्ने देखाउँछ जबकि चीन, दक्षिण कोरियामा पूर्ण रुपमा आवतजावत रोकिएको थियो । हामीकहाँ पनि त्यस्तै चाहिन्छ कि जस्तो देखिन्छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म केही केस देखिए ती विदेशबाट आएको पाइएको छ । थोरै केसमै लक डाउनमा जानु सरकारको राम्रो कदम हो । विकासोन्मुख देश भएर पनि कम्प्लिट लक डाउनमा जान सरकारको लागि पनि चुनौतीपूर्ण पनि थियो । म यस कार्यको सराहना गर्छु । लक डाउन कहिलेसम्मको लागि भन्ने नेपालमात्र नभएर संसारभरकै लागि एउटा अहम प्रश्न बनेको छ । चीनले लक डाउन गरेर नियन्त्रणमा लियो तर अब खुल्ला गर्दा के हुन्छ ? भोलिका दिनमा हेर्न नै बाँकी छ । भोलि रोगले कुन रुप लिन्छ त्यसै अनुरुप चल्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा थोरै केस देखिन्छ । टेष्ट नै कम भएर थोरै भएको हो कि भएकै थोरै केस हो अहिले भन्न सकिँदैन । तर अहिलेको समयमा नेपालमा आइसियु बेडहरु असाध्यै कम छन् । वीरमा ११, टिचिंगमा पनि ११ वटा र टेकुमा ३ वटा मात्र छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले अहिलेको समयमा आइसियुको बेड बढाउने, अस्थायी अस्पतालहरु बनाउनुपर्छ । पर्सनल प्रोटेक्सन इक्युपमेन्ट (पीपीई)हरु मास्क, पञ्जा, गाउनहरुको जोहो गर्नुपर्छ । अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ जनचेतना जगाउनु हो । यो रोग के हो, हात कसरी धुने, कसरी सर्छ भन्ने बारेमा जनचेतना जगाउनु अत्यावश्यक छ ।